Ukhala ngosizi ejele ogile indodakazi - Ilanga News
Home Izindaba Ukhala ngosizi ejele ogile indodakazi
Ukhala ngosizi ejele ogile indodakazi
Uyise wesisulu ufisa umndeni umzamele imali yebheyili uthi ubulawa yindlala ezitokisini
KUBONAKALA ngeqhuzwana lesisu entombazaneni okusolwa ukuthi imithiswe nguyise. ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
UVUTHA ungabaselwe umndeni wowesifazane wasoKhukho, oNdini, ongunina wentombazanyana (14), ILANGA elibike ngayo ngoLwesine ukuthi kusolwa uyise ngokuyidlwengula yaze yamitha, kuyimanje inezinyanga eziwu-7 izithwele.
NgoMgqibelo, ILANGA livakashele umndeni wale ntombazanyana othe kufana nse nokuthi usemanzini ngenxa yesenzo sikamsolwa naye esingeke simdalule ukuvikela ingane.
Kuthe uma leli phephandaba lifika kulo mndeni, unina kamsolwa onguninakhulu wesisulu wavele wakhihla isililo, wathi akaze azitshele ukuthi into enjengalena ingenzeka emzini wakhe.
ILANGA liphinde labona nehlashana elingezansi komuzi lapho kuthiwa umsolwa ubejwayele ukuyodlwengulela kulona indodakazi yakhe.
“Ingane ithi ubeyilala maqede athi mayiyogeza emfuleni iphinde ibuyele kuyena, aqhubeke lapho abegcine khona. Ithi ngisho seyopha, ubeqhubeka nokuyinukubeza. Besingazi ukuthi emndenini wethu singathelwa ngehlazo elingaka.
“Sifana ncamashi nabantu abazilile ngoba kasazi ukuthi unina wengane simduduze sithini, kasazi nokuthi sithini enganeni ethwele isisu sikayise,” kusho ilungu lomndeni kamsolwa.
Isisulu nonina bebehlala egcekeni linye nomndeni wakubo kamsolwa emuva kokuba eqale ukukhokha ilobolo, kanti kuvela ukuthi bebehlala endlini eyikamelo elilodwa lapho bebelala khona njengomndeni, njengoba benezingane ezintathu.
Izihlobo zithi yize bezingekho izimpawu zokuthi ingane iyahlukunyezwa ngokocansi, kepha bezike zibone indlela umsolwa abethanda ukuthi ihlale iseduze naye ngaso sonke isikhathi ukuthi kayijwayelekile.
“Ubethi uma eyothandaza ehlathini, athi mayimphelezele, kuthi noma eya endlini encane athi mayimphelezele.
“Le nto beyisixaka kodwa singakhulumi lutho ngoba akukho obekukhombisa ukuthi ingane iyahlukumezeka.
“Ngisho endlini yabo, umbhede wakhe ubefuna wendlulwe yiyona ingane unina ebe ekhona,” kusho elinye ilungu lomndeni.
Ngesikhathi ILANGA lihambele lo mndeni, unina wesisulu nezingane zakhe bebengekho.
Kuthiwa ugodukile wathi usayopholisa, ikhanda acabange kahle ngekusasa lakhe nezingane zakhe.
Okufike kwavela wukuthi umsolwa ushayele unina ucingo ethi ucela bamhlanganisele imali yebheyili njengoba kulindeleke ukuba ayovela ngoLwesithathu eNkantolo yeMantshi yaseMahlabathini. Kuvele nokuthi ukhala ngokuthi uyafa yindlala ezitokisini ngakho-ke ucela ukuhanjiselwa okuya ngasethunjini.
Elinye ilungu lomndeni liveze ukuthi unina akazimisele ngokuzihlanganisa nomsolwa ngoba vele bebengabhekani, ekhala ngokuthi unina uyamthakatha.
“Manje ngoba eseboshelwe imikhuba yakhe, useyazi ukuthi unomama? Akasamthakathi yini njengoba ebethi uyamthakatha nje?” kubuza elinye ilungu lomndeni ngokukhulu ukunengeka.
ILANGA liye eMnqawe kubo kanina wesisulu. Abomndeni bathe kabafuni nokuyizwa indaba kamsolwa, okuthiwa uzishaya ziphindelela izingcingo kunina wezingane zakhe ethi ucela basule icala.
“Wenza imikhuba emikhulu kangaka ngoba efuna khona ukuyohlala ejele futhi kumele ayobolela khona. Kuyasixakake ukuthi usethi makwesulwe icala ngoba ecabanga ukuthi sihambisana nento ayenzile.
“Akukho cala elizosulwa futhi nodadewethu (unina wesisulu), sicabanga ukuthi uyabona ukuthi kuphelile manje phakathi kwakhe nalo muntu, kumele abheke izingane zakhe, aqhubeke nempilo yakhe,” kusho omunye wodadewabo bakanina wesisulu.
Lo mndeni uthe kawukazi ukuthi kuzokwenziwa njani ngengane yesisulu ngoba usalinde kudilike obaba bakhona ukuze kuhlalwe phansi, kuthathwe isinqumo.
“Ubedlala ngodadewathu emhlukumeza kanti uyazi ukuthi uzitika ngengane yakhe futhi. Bebehlala ngokuxabana kanti nengane iyasho ukuthi wathi ingalinge itshele muntu ngalokhu akwenza kuyona ngoba uyoboshwa izandla nezinyawo.
“Lokho kukodwa nje, kusho ukuthi ubazi kahle ukuthi ubenzani. Sifisa angatholi ngisho ibheyili, ahlale ejele abolele khona,” kusho ilungu lomndeni.
Unina wesisulu uvele avukwe yisibibithwane uma ekhuluma ngalolu daba njengoba ethi kuyena kusazifanela nokuthi usephusheni nje.
“Kuyimanje kangazi ukuthi ngizokwenzenjani, ngizozinika isikhathi sokucabanga, kodwa yena nje, udlala ngesikhathi, akukho cala engizolesula ngoba kwalona lalingavulwanga yimina.
“Umuntu ngokahulumeni, ngakho-ke wuhulumeni okuyomele umthole engenacala uma efuna ukuphuma,” kusho yena.
Uthi uyaqonda ukuthi indodakazi yakhe beyisatshiswa ngoba nabo bebehlala ngokumesaba umsolwa ngoba ubengumuntu obenolaka.
Uthi uvuka umbhejazana uma kukhulunywa ngeyokuthi umsolwa uthi ubelala nendodakazi yabo ngoba emncisha ucansi.
“Bese kuphele abantu besifazane yini ngoba naye ubengaqonywa njengamanye amadoda uma ebona ukuthi ngiyamncisha.
“Lokhu kumnika imvume yokulala negazi lakhe?” kubuza unina wesisulu.
Previous articleIPirates idedele ulabhabha kwiChiefs
Next articleKumethusile ukwamukelwa ngabaculi